जीवनकुमार शाक्य हरेक प्राणी एक दिन मर्नै पर्छ । तैपनि अनावश्यक घमण्ड किन गर्छ । चाहे धनले सम्पन्न होउ या बलले । बाँधेर लैजान्छ एकदिन कालले । हरेक प्राणी एक दिन मर्नै पर्छ । जगत जित्ने नेता किन नहुन एक दिन त…
'मैले पढ्न थाल्दैमा किन महाभारत ?'
'म ओली (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) जीको कदर गर्छु । उहाँको राजनीतिक चातुर्य र क्षमताको प्रशंसक पनि हुँ', नायिका करिश्मा मानन्धरले भनिन्, 'तर, उहाँलाई जनताले ८ कक्षा पढेको नेता भन्दा निको लाग्दैन ।' नयाँ शक्ति पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय नायिका करिश्माले सोमबारको कार्यक्रममा…
हुनेवाली सासुसंग प्रियंकाको प्यार
२० भदौ । नेपाली चलचित्रकी अहिलेकी व्यस्त नायिका प्रियंका कार्की चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्दादेखी नै कुनै न कुनै रुपमा चर्चामा रहिन । एक्टिंङ, नृत्य, गायन सबैमा पोख्त कार्कीको आकर्षक शारीरिक बनावट र सुन्दर अनुहारले पनि उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्‍याइरहन्छ । तर पछिल्लो समय…
सुर्खेतमा तीज विशेष कार्यक्रम हुँदै, को को आउँदैछन् कलाकार ?
२८ साउन, । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा तीज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ । ‘अग्रज कलाकारलाई सम्मान, नवसर्जकलाई प्रोत्साहन कला संस्कृतिको संरक्षण हाम्रो अभियान’ भन्ने मुल नाराका साथ सिंगारो म्युजिक प्राली सुर्खेतले भदौ ३ गते कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको हो । प्रालिका प्रबन्धक…
हरि विष्टको मौलीक तीज कोसेली नदि तिरैमा सार्वजनिक (भिडियो सहित)
सेरोफेरो२० साउन । लोक तथा दोहोरी सर्जक हरि विष्टको मौलीक तीज गित नदि तिरैमा बजारमा आएको छ । हरेक वर्ष उत्कृष्ट मौलीक भाकासंगै आउने विष्ट २०७४ को तीजको लागि सम्झना माइतिको भाग ५ मार्फत नदि तिरैमा लियर आएका छन् ।
अमितबाबुको तीज कोसेली मेरी माया यसै त छन् राम्री (भिडियो सहित)
सेरोफेरोसाउन १९ । लोक गायक अमित बाबु रोकाय को "मेरी माया यसै त छन् राम्री" गीत बजारमा आएको छ । सुरेश महरा र चन्द्र राज रोकायको प्रस्तुति रहेको तीज गितमा सम्झना लामिछाने र अमितबाबु रोकायले स्वर दिएका छन् । यस गितमा नव…
चन्द्र शर्माको ‘बाच्छिले धान खायो’ (भिडियो)
सेरोफेरो१७ साउन । लोक दोहोरी गायक चन्द्र शर्मा र टीका तारामी मगरकोको तिज विषेश झ्याउरे गीत ‘बाच्छिले धान खायो’को बजारमा यतिबेला सर्वत्र चर्चा छ । पश्चिमेली भाकामा ल्याइएको उक्त गीतमा नेत्र अर्यालको शब्द तथा खेम सेञ्चुरीको लय रहेको छ । बच्चु…
सरोजले भने ‘मसंग छ खालि जुन’
सेरोफेरोसाउन, १६ । प्रेम र बिछोडको भावलाई सबल र सरस शब्दमा उतार्न सफल सरोज गिरीको पहिलो सांगितीक कोसेली ‘सुभाषितः मसँग छ खाली जुन, प्रकाश छ तिमीसँग’ बजारमा आएको छ । त्रिभुवन विश्व बिद्यालयमा सामाजिक कार्य विषयका उप–प्राध्यापक, युवा अभियन्ता, साहित्य र शिक्षामा…
चिरञ्जीवीको फेसबुक लाइभ बजारमा
सेरोफेरो९ साउन । लोक गायक चिरञ्जीवी जि.सीको तीजको कोसेली फेसबुक लाइभ बजारमा आएको छ । नेपाली महिलाहरुको महान चार्ड तीजको अवसर पारी सौगात म्युजिक प्रा.लिले बजारमा ल्यायको गितमा श्री कृष्ण बम मल्लको लय र शब्द तथा चिरञ्जीवी जि.सी र लक्ष्मी…
छोडी जानेलाई अन्तिम प्रेम पत्र
खुम अविरल जिन्दगी जीउँदै गर्दा विभिन्न प्रकृतिका सम्बन्धहरु बन्छन् र टुट्छन् । कुनै सम्बन्ध बन्दाबन्दै टुट्छन् कुनै बने पश्चात । जति बनाउन कोशीस गरेपनि बन्दैनन् कुनै सम्बन्ध अनि जति टुटाउन प्रयास गरेपनी टुट्दैनन् कुनै । तर कहिले काँहि गहिराइमा…